Iiflamingo tattoos kunye nentsingiselo yazo | Ukuzoba
Nat Cerezo | | IiTattoos zezilwanyana
Ukuqhubeka nomgca wethu wamanqaku ukusuka iiTattoos zezilwanyana, masithethe nawe malunga Iiflamingo tattoos, ezinentaka yaziwa kwihlabathi liphela ngenxa yento emelweyo yimimandla emininzi yeplanethi.
Ewe loo ntaka inemilenze emide kunye neethoni epinki ethi, ngaphandle kwento onokucinga ngayo, ayisiyonto yoqobo, Kuba bamkela lo mbala ngenxa yokutya abakutyayo. Kweli nqaku malunga neetattoo zeFlamingo sifuna ukukwazisa malunga nophawu kunye nentsingiselo yesi silwanyana. Masiqale!
1 Ithetha ukuthini itattoo yeflamingo?
1.1 I-flamingo, intaka ekhethekileyo
2 Iintsingiselo ezahlukeneyo zeflamingo tattoos
2.1 Intsingiselo yeeflamingo ngokwembonakalo yazo
2.2 Intsingiselo yeeFlamingo ngokwenkcubeko
3 Zifuzisela ntoni iiflamingo ezipinki?
4 Zifanekisela ntoni uthando?
5 Izimvo ezincinci zeflamingo tattoo
6 Iifoto zeFlamingo Tattoos
Ithetha ukuthini itattoo yeflamingo?
Ngaphambi kokuba ndiqale ukudwelisa zonke iisimboli ezinokubakho, Masiqale ngokwazi esi silwanyana kancinci kancinci, ukuze siziqonde zonke iintsingiselo zayo.
I-flamingo, intaka ekhethekileyo
IFlamenco yi isilwanyana esintlalontle kakhulu kwaye senza iikholoni zezigidi zabantu, Lowo umbono wakhe wenza umbono omangalisayo wendalo. Kwakhona, ukuba uhlala eMntla Melika, ndicinga ukuba uyazi ukuba i-flamenco luphawu olusemthethweni lwelizwe laseFlorida eMelika. Kule minyaka ikwayile icon ukumela iipaki ezinkulu zekharavani.
Omnye wemifanekiso eyaziwayo kakhulu ngeflamingo kuxa le ntaka ilele kwenye yemilenze yayo. IFlamenco enkulu, ekwabizwa ngokuba yi "American flamenco" inobude obuphakathi kwe-1 kunye ne-1,5 yeemitha. Inomlomo oguqulweyo kwaye itya i-algae, iplankton, intlanzi encinci kunye nemibungu yezinambuzane. Njengoko besesitshilo, umbala wayo opinki ngenxa yokutya kwawo, okwenziwe ngeshrimp kunye nezinye ii-crustaceans ezincinci ezityebile kwi-pigment carotene.
Iintsingiselo ezahlukeneyo zeflamingo tattoos
Ukubakho kwiindawo ezininzi zehlabathi, kwaye uyintaka ebabazekayo, inyani kukuba i-flamingo ineentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo, ngamanye amaxesha kusekwe kwindlela abaziphethe ngayo nakwimbonakalo yabo, kwaye ngamanye amaxesha kwinkcubeko yeendawo abakuzo. Ke masisahlule kula macandelwana mabini:
Intsingiselo yeeflamingo ngokwembonakalo yazo
Enye yeentsingiselo zokuqala ukuba ii-flamingo zinxulunyaniswa nombulelo kwinkangeleko yazo ubuhle kunye nokulinganiselangokuqinisekileyo ngenxa yesiqhelo sayo esithandekayo sokulala kwenye yemilenze yaso. Kwi tattoo, i-flamingo kule ndawo imele, njengoko unokucinga, ukukhangela kwakho ukulinganisela.
Kwaye, njengebhalansi, Iiflamingo zikwadume ngobuhle bazo bemvelo, mhlawumbi ngenxa yombala omhle weentsiba zazo. Ke ngoko, eyona nto ibonakalayo kumvambo (kwaye ngakumbi xa ifuna ukumela ubabalo lwe-flamenco) kokukhona iya kuhambelana nobuhle bemvelo kunye nokwahluka.
Ubuhle, ngokungafaniyo nobuhle, abuzalwanga ngokupheleleyo. Iiflamingo, njengathi, kufuneka zifumane indlela yokufika ngomlenze omnye zingawi, nditsho ndifunda nokubhabha. Kungenxa yoko le nto esi silwanyana sinxulumene nokufunda kunye nokukwazi ukwenza izinto ezinzima zibonakale zilula.
Intsingiselo yeeFlamingo ngokwenkcubeko
Kwinkcubeko yase-Egypt, kwi-hieroglyphs flamenco yayiluphawu lombala obomvu. Abemi base-Egypt yamandulo bayihlonipha iflamingo njengophawu oluphilayo lothixo welanga, uRa.
Kunoko, eMntla Melika iFlamingo eplastikhi epinki iye yangumfuziselo wekhithi incasa embi, nangona ikwasondelelene kakhulu nolwandle kunye nepati, mhlawumbi kuba, njengoko besitshilo, ngumfuziselo waseFlorida, othi ngexesha lentwasahlobo ibe sisiseko esiphambili sabasaphuli beNtwasahlobo abaninzi ofuna ukuphuma kubo kwindawo. Kungenxa yoko le nto ii-tattoo apho ii-flamingo zihamba kunye ne-cocktails, imithi yesundu okanye iilwandle ziqhelekile.
Ngakolunye uhlangothi, eScotland iflamenco inxulumene nokulungiselela kobungcali kunye nomsebenzi, intsingiselo eyintsusa (kwaye mhlawumbi ayifumaneki kwenye indawo).
Ekugqibeleni, kwi-fengshui kuthathelwa ingqalelo ukuba umfanekiso oneflamingo ebekwe emazantsi endlu yakho unokuliphucula ithamsanqa lekhaya lakho.
Zifuzisela ntoni iiflamingo ezipinki?
Umbala opinki weeflamingo, zibetha kakhulu, Inxulunyaniswa nesimboli ekhethekileyo: yokuma ngaphandle kwaye ufuna ukutsala umdla kwaye ungoyiki ukwenza njalo. IFlamenco ngumvambo ogqibeleleyo kwabo bantu bafuna ukubonisa ngokuchanekileyo ngesiqwenga, abasoloko befuna ukuba liziko lokuqwalaselwa.
Iflamenco kukwanxulunyaniswa nokuzithemba, kuba sisilwanyana apho sinokuphefumlelwa ukuba sizive ngcono ngathi, senze ngokuzithemba kwaye sibe nesimo sengqondo sokuba "ukuba awuyithandi, sukujonga".
Ukuba ufuna ukubonisa ezi ntsingiselo, kumvambo, Kuyacetyiswa kakhulu ukuba bakhethe uyilo olubetha kakhulu, enemibala eqaqambe kakhulu kunye nesitayile imifanekiso okanye ngokungaqhelekanga, enemigca engqindilili nephawulwe.
Zifanekisela ntoni uthando?
Enye yeentsingiselo ezinamandla kwesi silwanyana inxulumene nothando, mhlawumbi ngenxa yesiko lalo lokutshatisa, ezibandakanya intshukumo yomdaniso entsonkothileyo kunye nokuhambisa intamo namaphiko. Nangona bengenamfazi omnye ubomi babo bonke, ii-flamingo zithembekile, zihlala kunye neqabane elinye ixesha elipheleleyo kwaye zabelana ngoxanduva lokukhulisa amantshontsho.
Ke ngoko, enye yeentsingiselo ezinxulumene nesilwanyana esixabisekileyo sesothando. Kwiitattoo kulisiko ukubonisa kunye neeflamingo ezimbalwa. Ukuba ufuna ukumnika idosi yeswekile, yenza iintamo kuyilo olumilise okwentliziyo!
Izimvo ezincinci zeflamingo tattoo
Nangona i-flamingo tattoos inayo amawaka okhetho kunye noyilo olunokwenzeka, kunokwenzeka ukuba ezincinci zithandwa kakhulunjengoko ubume beFlamingo bulungele uyilo olulula.
Umzekelo, unokukhetha uyilo kuphela ngombala omnyama nomhlophe, okanye ngombala omncinci, ocekeceke kwaye unolwandlalo oluhle kakhulu ukuhombisa isihlahla, iqatha okanye iminwe.
Zijonge kakhulu kwisithende, nangona ibingenakubonakala injalo ngenxa yesimo sentaka, esihlala sime nkqo. Nangona kunjalo, ngokunyuka uye ngaseqatheni, isiphumo siyi-tattoo enobukrelekrele kakhulu kwaye intle.
Kwaye ukuba ufuna into eyahlukileyo, Endaweni yokuqaqambisa umbala wepinki we-flamingo, unokukhetha ukugcwalisa iintsiba zayo nge-mandala okanye uyenze i-origami. Ziyilo olunzima ngakumbi, kodwa zinxitywe kakuhle, zikhangeleka zikhulu ngobukhulu obulinganiselweyo.
Iiflamingo tattoos zineentsingiselo ezininzi, kuba zibonisa intaka enomdla kwaye kakhulu, ebetha kakhulu, akunjalo? Khawusixelele, unayo itattoo nale ntaka njengomlinganiswa ophambili? Kufuzisela ntoni? Khumbula ukuba ungasishiya nezimvo usixelela into oyifunayo, ukongeza, sikushiya ukhetho lweefoto zeflamosos ukuba zikukhuthaze!
Iifoto zeFlamingo Tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » IiTattoos zezilwanyana » Iiflamingo tattoos kunye nentsingiselo yazo
Iimpawu zeValknut okanye iqhina lokufa, yintoni intsingiselo yalo?